How'd it happen and more reports?: တောင်ပေါ်လက်ဖက်စိုက်ခင်း ဘယ်အခြေရောက်နေပြီလဲ!
ကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျ... ဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲလို့ ?
နှစ်ပေါင်း ၅၀လောက် တံခါးပိတ်ဝါဒနှင့် အမြင်မကျယ် တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင် လူတစုတွေကြောင့် ပြည်သူလူထုတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက် နိုင်ငံတကာမှာ အနှိမ့်ခံဘ၀ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ရသလဲ? ဒါကို မြင်တွေ့လို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ တကယ်ကိုတော်ထက်တဲ့ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးတွေ အများကြီးကိုလိုပါတယ်၊ ဒါလဲတကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အရာတခုပါ ၊
ရှိကော ရှိပါ မလားဘဲ! သတိ.... အမျိုးကိုချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်!
စီးပွားရေးမသမာလူတစုကြောင့် အမိမြေတောင်ပေါ်ဒေသက လက်ဖက်တောင်သူလေးတွေဘ၀ပျက်သွားတာ ဆိုးဆေးတွေသုံးလို့တဲ့ ဘ၀ပျက်ကုန်ကျပြီလေ ၊ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်စတင်ဝင်တိုးကြည့်တဲ့ စကာင်္ပူမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိဆိုးဆေးလေးတွေပါဝင်နေတာကြောင့် စကာင်္ပူက Agri-food & Veternary authority of Singapore အစားအသောက် စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကစတင် စစ်ဆေးတွေရှိခဲ့တာပါ ၊ ဘယ်အချိန်ကတည်းကဒီလို ကျန်းမာရေး မညီညွှတ်ကျတဲ့ အစားအသောက်လေးတွေနှင့် အသီးမနှံလေးတွေမှာ သုံးစွဲနေတာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲမသိနိုင်ပါဘူး? အမိမြေမှာ ဒီလိုကျန်းမာရေးပညာပေး အသိပညာလေးတွေမရှိကျတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ? ပြည်သူလူထုတွေကို အမှောင်ချထားတာကြာပြီ ဆိုတော့ အခုလို နည်းပညာလေးတွေ တအားတိုးတက်လာချိန်မှတော့ ဘယ်လိုမှာတားဆီးလို့မရတော့ပါဘူး? အဖြေပေါ်ထွက်လာတာပါဘဲလေ။
အမိမြေက တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ လက်ဖက်စိုက်တောင်ပေါ်သားတွေကို ခေတ်မှီနည်းစတစ်လေးတွေ
ပညာပေးဖို့ အတော်ကိုကြိုးစားယူရမဲ့ အချိန်ကာလလေးတွေ အများကြီးကိုလုိုပါတယ်၊
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ထက် အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ တရုတ်က ၁၅သိန်းတန်ထုတ်တယ် ဘာမှာ မဟုတ်တဲ့ သီရီလကာင်္ကျွှန်းလေးတောင် ၃သိန်းနီးပါးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်၊ အရှေ့တောင်အာရှာမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့မြေတွေမှာ ဘာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ချောလေးတွေ စီးပွားဖြစ် ထွန်းအောင် မလုပ်နိုင်ကျ တာလဲ?
BY JASMIN |
I can confidently say I survived my college years withapretty solid GPA in four years. Don’t get me wrong. I tried to like coffee; the warm aroma and fun little Keurig K-cups really tempted me towards the dark side. It’s just that coffee never sat well with me. Asanaturally hyper-active person, coffee seemed to just exemplify my energy and anxiety, while continuing to leave my body exhausted.
Thankfully, I came across black tea and all of its glory. Sure, it tastes like dirty water, but afterafew squirts of honey, andatad bit of milk, I can drink it to snap out of the early morning blues. Real talk though: black tea has completely transformed my life. It gives me all of the energy coffee promises, without the jitters or bad breath. Today’s infographic totally understands my obsession with tea by reminding everyone of its benefits, and I’m fan-girling all over the different tea brands. I actually haven’t heard of half of these brands, so I have something to look forward to during these upcoming months. Try switching your usual cup of coffee foramug of black or green tea this week. It might takeawhile, but I’m confident that you’ll see some positive results! [via]